कोरोना नियन्त्रण गर्न सिमा क्षेत्रमा प्रहरी चेकपोष्ट विस्तार गरिनुपर्छ–पूर्बमन्त्री यादब
रामसिंह यादब–पूर्वमन्त्री एवं नेता-नेकपा
१) तराइका दुई हस्ति राजनीतिक दलहरु राजपा र समाजवादी पार्टी एक भएका छन् । उनीहरुको एकताले राष्ट्रिय राजनीति र मधेशमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
उनीहरुबीच जे जसरी रातारात एकता भयो । त्यसमा केही कारण त होला । यद्यपी उनीहरुबीच एकीकरण गर्ने कुरा केही पहिल्यै देखि नै मिडियामा आएको हो । तर उनीहरुको राजनीतिक प्रवृत्ति एकता हुने खालको थिएन । आवश्यकता र स्वार्थ अनुसार दुइ पार्टीबीच एकिकरण भएको हो । राजनीतिक समयचक्रले आत्तिएर एकता भएको हो । अर्को अलिकति चलखेल पनि भयो होला । खासमा जो अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी थियो । त्यसैबाट आत्तिएर रातविरात पार्टी एक भएका हुन् । तर उनीहरुको एकता टिकाउ हुनेमा शंका छ । कुनैपनि बेला भत्किन सक्छ ।
२) तपाइ त मधेशमै हुनुहुन्छ । मधेशी जनतामा राजपा–समाजवादी पार्टी एकताको प्रभाव कस्तो पाउनु हुन्छ ?
यो एकताबाट के होला र खै ? उनीहरुले आफना फाइदाका लागि एकता गरेका हुन् । त्यसकारण मधेशी जनताले पनि त्यो किन र कसरी भयो बुझेका छन् । यद्यपी दुइ पार्टी एक हुनु भनेको राम्रै पनि हो । जे–जुन कारण ती पार्टीहरु एक भएपनि सो पार्टीका कार्यकत्र्ता, सर्मथकमा अलिकति उत्साह त देखिएकै छ । तर टिकाउ भएन भने त्यसको के अर्थ छ र ? उनीहरु मुद्धामा एक भएका होइनन ्। भय र त्रासमा एकता गरेका हुन् । पछि सुध्रिय भने अर्कै कुरा हो । तर अहिलेको चरित्रले पार्टी एकता टिकाउ हुने देखिदैन ।
३) तपाइकै पार्टी नेकपामा पछिल्ला समय विकास भएका राजनितिक घट्नाक्रम, शक्ति संर्घष आदिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ त ?
सबैभन्दा ठुलो र सरकार पनि चलाइरहेको पार्टीमा अलिकति अन्र्तरविरोध त भइहाल्छ नी । त्यो स्वभाविक पनि हो । खासगरी सञ्चार माध्यममा अलिकति शिर्ष नेताहरुबीच अन्र्तरविरोध भएका कुरा आइरहेका छन् । जिवित पार्टीमा त्यस्तो हुन्छ पनि । तर अब ति कुराहरु पनि ‘सेफ लेन्डिङ’ भइसकेका छन् । पार्टी नेतृत्वबाट आत्मआलोचनाहरु भएको र सहमतीमा अघि बढ्ने, संयुक्त रुपमा मिलेर अघि बढ्ने भन्ने खालका कुरा आएका छन् । पार्टीगत निर्णय, छलफल भएर सहमती भएको देखिन्छ । त्यसकारण अब समस्या छैन ।
अर्को, अब प्रगतीशील बजेट आउला, बजेटले अलिकति जनतालाई राहत दिने हिसावले कार्यक्रमहरु आएपछि अहिलेको सरकार प्रतिको असंन्तुष्टी कम हुदै जान्छ ।
४) जनतामा त सरकार प्रतिको विश्वास घटेको–घट्यै छ नी ?
अलिकति त्यो कुरा पनि हो । कोरोना समस्याले पनि जुन हिसावले सरकारले काम गर्न सक्थ्यो । त्यो सकेको छैन । त्यो नसकेपछि अलि बढी आलोचना भएका हुन् । नेपाली जनताले सरकार प्रति आशा राख्नु स्वभाविक छ । कहिले आशा, कहिले निराशा त भइ नैहाल्छ नी ।
५) बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । कस्तो बजेट ल्याउनु पर्ला ?
कोरोना न्युनिकरण र त्यसबाट उत्पन्न यावत समस्याहरुको सही सामाधान गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ बजेट पनि त्यसै प्रति लक्षित हुनुपर्छ । बजेट जनमुखी हुनुपर्छ । कृषिमा आधारित हुनुपर्छ । कोरोनाले रेमिटयान्स घट्ने र विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने अर्थवीदहरु धरणा आइरहेका छन् । त्यसकारण अब बजेट कृषि र रोजगारीमुखी नै हुनुपर्छ । त्यसले मात्रै हामीलाई आत्मनिर्भर गराउँदछ । संकटकाबीच पनि अवसर त हुन्छन् नी । सरकारले त्यसलाई पहिचान गरेर आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउने हिसावले बजेट ल्याउनु पर्छ ।
६) भारतमा कोराना भाइरसले महामारीको रुप लिइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालका तराइ–मधेश लगायत क्षेत्र अलि बढी नै प्रभावित हुने देखिएको छ । यस्तोमा मधेशमा कोरोनाल नियन्त्रण गर्न त्यहाँको सरकारले गरिरहेका कामलाई कसरी हुर्नुभा छ ?
सिमा सुरक्षा बढाउने, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा कडाइ गर्दै प्रवेश गराउँदा सुरक्षित साथ गराउने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कडा स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसको लागि अलिकति संघीय सरकारले पनि ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाको कुरामा प्रदेश सरकारको त्यति लगाम हुदैन । भारतसँग सिमा जोडिएकले लकडाउन कायम गर्ने, नेपाल आउनलाई कडा परिक्षण रक्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्थ ागर्ने आदि हुनुपर्छ। तर अहिले चित्तबुझ्दो काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन । डब्लुएचओका अनुसार हामी अझै रेड जोनमै छौ । जोखिम धेरै छ । बोर्डरमा आउने र जाने धेरै छन ्। भाग्यले बचाएको छ भन्दा नी हुन्छ हामीलाई । मधेशका जनतारोग सम्बन्धमा गम्भिर नभएकाले कोरोना फैलने जोखिम ज्यादा छ । यहाँ अलिकति चेतनाको अभाव पनि छ । मधेशमा सिमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी, चेक पोष्ट बढाउन जरुरी छ । नत्र नियन्त्रण गर्न बडो कठिनाइ छ । यदी कोरोना संक्रमण बढ्यो र फैलियो भनेनिकै ठुलो क्षती व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । जुन कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
प्रकासित मिति २०७७–१–२५